Best Wadooyinka Tareenka Yurub | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Best Wadooyinka Tareenka Yurub
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo(Last Updated On: 28/08/2020)
Marka aad waayo-aragnimo raaxada, habboonaan iyo guud yaab safarka tareenka, waa in nolosha pre-tareenka laabto adag. Gaar ahaan marka aan ka hadleynay marinnada Best tareenka Yurub ee xagaaga. qaaradda A ka buuxaan wadooyinka muuqaal dabiici ah, Bbc riwaayado iyo siyaado ah oo cajiib ah meelaha si gawk at.
safarka tareenka waa by ilaa hadda sida ugu muuqaal dabiici ah oo raaxo leh si aad u hesho Yurub, oo waxaa jira qaar ka mid ah wadooyinka in si dhab ah afuufi doonaa maskaxdaada, gaar ahaan inta lagu jiro Summer!
Best jidadka tareenka Yurub: Tabobaro des Pignes, France
The khadadka Eurostar iyo tareen kale soo bandhigto adeegyo badan. Oo hotels Kooxda martida ah soo dhawaynayaa heerka off-peak. Waxaa jira maalmaha qoraxdu ammaan badan marka aad yeelan kartaa cabitaan iyo xataa cuntada ka baxsan.
Baro tan tareenka ee gaarka loo leeyahay, in gaarista ugu quruxda badan gobollada ee France. Provence caan ku tahay dabeecadda iyo muuqaalka picturesque, safarka runtii waa fikrad fiican, oo hubaal ah mid ka mid ah wadooyinka Best tareenka Yurub in ay qaataan! On its way the tareen ag maraaba Wabiyaal, buundooyinka, tuulooyin yaryar oo qurux badan sida St Andre les Alpes iyo Entrevaux ilaa meeshii ugu dambaysay ee ay gaadhay - Digne les Bains - oo ah magaalo madaxda gobolka Alpes-de-Haute-Provence.
Duration: 3 saacadood, 145 km
Marka si ay u tagaan: guga, xagaaga, dhici
Best jidadka tareenka Yurub: The West Rhine Railway, Germany
Rhine The ma aha oo kaliya mid ka mid ah Wabiyaal ugu quruxda badan ee Europe, laakiin waxa ay sidoo kale mid ka mid ah biyaha ugu muhiimsan qaarada Afrika ee. Waxaa socodka qaar ka mid ah 1,320 kiiloomitir Switzerland jidka loo Netherlands iyo badda woqooyi oo dhan. Mid ka mid ah qaybaha ugu rafcaanka ee webiga this xoog badan oo dhex qulqulaya Rhine Dhexe Valley Germany (Rheintal), meel ka mid ah qurux dabiici ah u fiican. Dhab ahaan, stretch Webiga kordhin ka Mannheim ee koonfurta in ay Koblenz ee waqooyiga faanaa muuqaal si cajiib ah in qayb weyn oo, gudbiyo sida Rhine dooxada (Rheinschlucht), ayaa loo magacaabay a UNESCO World Heritage Site.
Thanks to badan Daar wayn iyo magaalooyinka taariikhiga ah, stretch this of Rhine ah ayaa fanaaniinta qarniyo saamayn, qorayaasha, iyo composers, oo sida xaqiiqada ah waa mid ka mid ah wadooyinka Best tareenka Yurub intii lagu jiray xagaaga.
Tareenka wuxuu ku socdaa webiga Rhine wuxuuna daaha ka qaadaa goobaha sawirada leh ee Jarmalka. Dalcadaha dhagax la canab ah, Daar jir ah on top iyaga - waxaad ka heli kartaa off tareenka iyo booqasho dhagaxa Lorelei halyeeyga ah ee St. Goarshausen, ee kacda 120 m kor ku Rhine ah. A wadada aad u fiican, halka safraya iyo xataa magaalooyinkan Jarmal qurux badan.
Marka si ay u tagaan: xagaaga, dhici
Rauma Railway The, Norway
Tareenka Rauma waxay noqonaysaa iyo aad u badan oo caan ah ka mid ah dalxiisayaasha, sida waxa uu noqonayaa mid ka mid ah wadooyinka Best tareenka Yurub guga. Safarka A on tareenka this keentaa aad u dhow nooca cajiib ah u dhexeeya Andalsnes iyo Dombas.
safarka u dhexeeya Dombas iyo Andalsnes waa 114 km dheer iyo qaadataa 1 saacad iyo 40 daqiiqo. Tareenka ayaa maraa 32 buundooyinka – oo ay ku jiraan Kylling ku Bridge caan, 59 mitir kor ku webiga Rauma ah – iyo maraa 6 sugnan. tareenka waxay leedahay daaqado waaweyn, oggolaadaan in aad dib ugu Lulaa oo wuxuu ku raaxaysan ah muuqaal cajiib ah. Tareenka ayaa sidoo kale la soo dhaafay Trollveggen caanka ah – derbiga Troll ah, derbiga buurta dadab ugu sareeya Yurub.
Spring waa waqtiga ugu wanaagsan si ay u bilaabaan socday. Tareenka ayaa ka waddaa gaar ahaan gaabis ah iyada oo muuqaal qurux badan. Waxaa istaago sawiro at Kylling Bridge iyo derbiga Troll ah by, hage ku siin doona war iyada oo ku hadla ee, iyo sidoo kale waxaad heli doontaa buug yar oo macluumaad ah oo ku saabsan waxyaabaha muuqda ee safarka.
Duration: 1.5 saacad, 114 km
Marka si ay u tagaan: Summer
Bernina Express, Switzerland in Italy
gudbaya Alps in Bernina Express hubaal waa mid ka mid ah jidadka tareenka European Best in ay soo booqdaan Europe! Jidka, Bernina Express tirsan Isbahysiga Hollywood-style ka badan Landwasser Viaduct 65-meter-sare, Qaab dhismeedka saxiixa ee Railway Rhaetian iyo goobta UNESCO Heritage Adduunka.
Wadajir tareenka maraa 55 sugnan iyo in ka badan 196 buundooyinka ay ku ka CHUR in Tirano. Socotada waxaa lagu daaweeyaa in indhaha yaab inta ay safarka, sida qalooca Montebello ah iyada oo leh muuqaal Massif Bernina ah, sitoos Morteratsch ah, saddex ka harooyinka lej Pitschen, Lej Nair iyo White Lake, Alp Grum iyo Wareegtada Brusio Viaduct. In xagaaga, safarka lagu kordhin karaa ka Tirano in Lugano saarnaa Express Bernina ku Bus.
Duration: 4 saacadood, 123 km
CHUR in Tareenadu Thusis
Ready in ay guga gelin wadooyinka Best tareenka Yurub? Save A tareenka waxay kaa caawin kartaa, la jaale sahlan oo dhakhso leh NO ajuurada qarsoon! Maxaa neecaw!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-european-train-routes%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#seenyaale europetravel longtrainjourneys summerholidays talooyin tareenka